को बन्यो माओवादी महासचिव ? नाम सुनेपछि नेताहरु चकित — Imandarmedia.com
को बन्यो माओवादी महासचिव ? नाम सुनेपछि नेताहरु चकित
काठमाडौ। माओवादी महासचिवमा नयाँ पात्रको इन्ट्री भएको छ। प्रचण्डले सबैलाई चकित पार्दै नाम प्रस्ताव गरेपछि नेताहरु सबै चकित परेका छन्।
महासचिवमा कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, गिरिराजमणी पोखरेल लगायतले दावि गरेपछि प्रचण्ड संकटमा परेका थिए। बर्षमान नेता पुन महासचिवका सबैभन्दा बलिया दावेदार हुन्।
उनी महाधिवेशनमा सहभागी नभएपछि प्रचण्डलाई थप संकट भएको हो। आफूलाई महासचिव बनाउन प्रचण्डले खुट्टा कमाएपछि पुनले प्रचण्डलाई दवाब दिएर नयाँ पात्रको इन्ट्री गराएका छन्।
भर्खरै स्वास्थ्य लाभ गरेरनेपाल फर्किएका पुनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई महासचिवमा आफ्नो दावी कायम रहको स्पष्ट पार्दै आफू नभए शक्ति बस्नेतलाई महासचिव बनाउँन प्रचण्डसँग सर्त राखेका छन्।
अब माओवादी देशकै पहिलो पार्टी बन्ने र स्थानिय चुनावमा जितेर सबैलाई देखाई दिने बताए। उनले सकभर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने नभए माओवादी एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको बताए।